Blogger of this week:mukesh pokhrel - MeroReport
Blogger of this week:mukesh pokhrel
मुकेश पोखरेल भैरहवामा बसेर पत्रकारिता गर्दै आउनुभएका युवा पत्रकार हुनुहुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिक र हिमाल खबरपत्रिकासंग आवद्ध मुकेशले आफुले देखेका सामाजिक सवालहरुलाई, पत्रकारिता र मेरो रिपोर्टमार्फत बाहिर ल्याउने काम गरिरहनुभएको छ । निरन्तरको योगदान स्वरुप मुकेश, यो साता मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर हुनुभएको छ । संधैका साताको ब्लगरसंग जस्तै उहाँसंग पनि ब्लगिङ् र पत्रकारिताका सन्दर्भमा कुराकानी गरिएको छ ।
खासै धेरै भएको छैन । भर्खरै सुरु गरेको हुँ । बढीमा दुई महिना जति भएहोला ।
ठ्याक्कै यसैका लागि व्लग लेख्छु भन्ने त छैन । तर रिर्पोटिङ्गका लागि हिंड्दा भेटिएका विभिन्न कुराहरुलाई नै कहिले समाचार वा सुचनाका रुपमा कहिले फिचरका रुपमा लेख्ने गर्दछु ।
खासगरी अहिलेसम्म मैले धेरैजसो फिचर तथा समाचारहरु नै लेख्ने गरेको छु । तर संस्मरण लेख्न पनि मन पर्दछ र अरुले लेखेका संस्मरण पढ्नलाई बढी चाख लाग्छ ।
व्लग खासगरी एउटा सुचनाको बाकस हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर नेपालमा व्लगलाई त्यति बढी उपयोग गरेको मैले पाउँदिन । पछिल्लो समयमा केहीमात्रमा यसमा पनि विकास त भएको छ तर अँझै सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।
अन्य अविस्मरणीय क्षणहरु त धेरै नै छन । तर मैले भर्खर भर्खर मात्रै ब्लग लेख्न सुरु गरेको हुनाले ठ्याक्कै व्लग कै भन्ने त्यस्तो रमाइलो क्षण भने छैन ।
नेपालमा पत्रकारिता पेशाको सजिलो र अप्ठेरोको कुरा गर्दा यस पेशामा दुवै छ भन्छु म त । किनभने यो पेशामा दिनानुदिन भित्रिईरहेको सुचना प्रविधिले अहिले धेरै नै सजिलो गराइदिएको छ । साथसाथै सञ्चारमाध्यमहरुको विकास र बिस्तार पनि भईरहेको छ । समाचार पठाउनका लागि प्रविधिले सजिलो बनाएको छ बिगतमा जस्तो अप्ठेरो छैन । तर यो संगै पत्रकारिता क्षेत्रमा केही विकृति पनि आएका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि कुनै मापदण्ड भएन, सामान्य तालिम लिएकै भरमा, एक दुइवटा समाचार लेखेकै र रेडियोमा एक दुईपटक बोलेकै भरमा पत्रकार हुँ भन्ने चलन बढेको छ । यसले आम पत्रकारलाई एउटै दाँजोमा हाल्ने चलनलाई बढाएको छ जसका कारण पत्रकारिता पेशाको विश्वसनियता र यसको गरिमा घटेको छ । अर्कोतिर पत्रकारहरुले, अहिले पनि समाचार लेखेका दिनमा पैसा पाउने र समाचार नलेखेका दिनमा पैसा नपाउने ज्यालादारी जस्तो प्रथा कायमै छ । त्यस्तै समयमा तलव नपाउने, जिवन विमा, सञ्चयकोष लगायतका विभिन्न समस्या छन् । जसले गर्दा पत्रकारलाई सधै आर्थिक रुपमा कठिनाइमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका हामी पत्रकारहरुले यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ ।
यो पेशामा लागेर पैसा कमाउने भन्दा पनि नाम हो । तर यसो भन्दैमा भोको पेटले पनि त काम हुन सक्दैन । आज यही अवस्थाकै कारण धेरै पत्रकारहरुले पेशा बदलेको अवस्था छ । त्यसैले सजिलो छ भन्न पनि गाह्रो छ भने गाह्रो छ भन्ने हो भनेपनि यो पेशाको महत्व भनेकै चुनौतीसंगको जुधाई हो ।
एउटा पत्रकारको नाताले भन्नु पर्दा नेपाली पत्रकारहरुले अहिले कस्ता-कस्ता चुनौतीहरु भोग्नुपरेको छ ?
प्रमुख चुनौती भनेको मलाई लाग्छ, जिवन निर्वाह कै चुनौती हो । पत्रकारिताबाट मात्रै गुजारा गरेर नेपालका केही प्रतिशत पत्रकार बाहेक बाँकी पत्रकारहरु बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक काम गर्ने शिलसिलामा त विभिन्न खालका चुनौतीहरु आउने जाने भइ नै रहन्छ ।
मलाई लाग्छ रुपमा फरक भएपनि नागरिक पत्रकारिता र मुलधारको पत्रकारितामा सारमा त्यति भिन्नता छैन । किनभने दुबैले आम नागरिकलाई सुचना र जानकारी नै दिने हो । फरक यत्ति हो नागरिक पत्रकारिता जो कसैले पनि गर्नसक्छ अथवा नागरिकले नागरिकका लागि गर्दछन भने मुलधारको पत्रकारिता पेशागत पत्रकारहरुले गर्दछन, जसमा ब्यावसायिक शिप र दक्षताको पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ ।
मलाई लाग्छ मेरो रिपोर्टले मुलधारको पत्रकारितामा समेटिन नसकेका कतिपय बिषयहरुलाई स्थान दिएको पनि छ, साथसाथै यसमा कतिपय सामाजिक सवालहरुमा अनलाईन मार्फत छलफल पनि हुनेगर्छ । एवं रितले यो नेपालका लागि नौलो प्रयोग पनि भएको हुनाले मैले मेरोरिपोर्टमा योगदान गर्न सुरु गरेको हुँ ।
मेरोरिपोर्टमा मुकेश पोखरेलको प्रोफाइल पेजः
Comment by uma thapamagar on July 3, 2011 at 6:02pm
mukes ji badhai cha ...
Comment by phani mahat on July 3, 2011 at 1:58pm
मुकेश जी बदाइ छ सामाजकि अबस्थाहरु लाइ बल्ग मार्फत बाढ्नु नै हाम्रो कतव्य हो नी
Comment by MadhuSudhan Guragain on June 29, 2011 at 7:37pm
Comment by एसवी गौतम on June 29, 2011 at 6:18pm
Congratulation Mukesh sir !!!
Comment by MeroReport on June 29, 2011 at 5:42pm
Congratulation Mukesh Ji!!! Hope to see more interesting contents from your side.